Maamulka Jaamacadda Somaville oo u dabaal degtay guul ay dhawaan gaareen “SAWIRRO” | Radio Muqdisho
Maamulka Jaamacadda Somaville oo u dabaal degtay guul ay dhawaan gaareen “SAWIRRO”
Munaasabadaan oo aheyd mid ardayda iyo maamulka Jaamacadda Somaville ay ugu dabaal dagayeen guusha dhawaan ay ka gaareen tartanka loo qabtay xarumaha ganacsiga dalka oo qeyb walba goonideeda tartan loogu qabtay ayaa waxaa ay Jaamacadda noqotay tan ugu wanaagsan dalka.
Munaasabadda oo Muqdisho lagu qabtay ayaa waxaa ka qeybgalay qeybaha kala duwan ee bulshada, maamulka iyo Waalidiinta ardayda dhigata Jaamacadda ayada oo qaar ka mid ah ardayda ay halkaasi ku soo bandhigeen suugaan ay ku muujinayeen sida ay ugu faraxsan yihiin guusha Jaamacadooda ay gaartay.
Maamulaha Guud ee Jaamacadda Somaville Dr Cabdisamad Sheekh ayaa balanqaaday in dadaalka ay guushaan ku gaareen ay sii laba jibaari doonaan.
Dr Cabdinuur Sheekh Axmed Guddoomiyaha Guud ee Jaamacadda Soma-ville oo soo xeray munaasabadda ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay guusha Jaamacadda,farxadana uu la qeybsanayo ardayda.
Jaamacadda Somaville ayaa ka mid ah Jaamacadaha ku yaala gudaha magaaladda Muqdisho oo ay wax ka dhigtaan in badan oo ka mid ah ardayda wax ka barata gobolka Banaadir, kuwaas oo arday badan ay ka aflaxeen.